Fomba fampiasam-bola | Heart Galaxy Culture (Beijing) Co., Ltd.
Vita ny fitifirana
FAQ & VAOVAO
Dingana 1. Mifandraisa aminay ary fantatray fa misy fahalianana amin'ny fampiasam-bola, avy eo ny ekipanay dia hanao fizahana ifotony hanamarinana ny fahaizan'ny mpampiasa vola.
Dingana 2 .Rehefa nandalo ny famerenana ny mari-pahaizana dia safidio ny sarimihetsika tianao hampiasa vola
Toa tsotra io dingana io, saingy raha ny tena izy dia fizahan-toetra ny fahitana sy ny fahaizan'ny mpanadihady. Rehefa misafidy horonantsary isika dia matetika no mandray fanapahan-kevitra feno mifototra amin'ny lohahevitr'io lohahevitra io, mitarika mpilalao sarimihetsika, talen'ny mpanoratra, mpanoratra an-tsarimihetsika, fandaharam-potoana, tanjaky ny mpamokatra. , ny tanjaky ny dokam-barotra, ny vidiny ary ny singa hafa. Anisan'ireny ny lohahevitra dia tokony hifanaraka amin'ny politika, hifanaraka amin'ny sanda mainstream, izay ny fepetra takiana fototra indrindra. Tadidio, ny safidin'ny horonantsary, dia tsy ny hifantoka fotsiny amin'ny teboka iray hametrahana ankapobeny , mila fitsarana mitombina izy amin'ny alàlan'ny famolavolana ny lafy tsarany sy ny fatiantoka ny. Hanome anao loharano vitsivitsy ny ekipanay araka ny tsenan'ny sarimihetsika anatiny sy ny fanadihadiana ny boaty taloha。
Dingana 3. Hahafantatra ireo fitaovana sy fifanarahana momba ny tetikasa
Inona no tokony ho fantatsika momba ny angon-drakitra momba ny tetikasa? Ohatra, ny bokin-tetikasa momba ny horonantsary momba ny tetikasa, ny fampitaovana ao amin'ny State State of Radio, Film and Television, ny ekipa mpamokatra sy ny mpilalao, ny mari-pahaizana sy ny tanjaky ny orinasan-tserasera Ary ny orinasam-pamokarana, ity no fiarovana ny fampiasam-bola, fa afaka manampy antsika hisafidy tsara kokoa ilay horonantsary.
Dingana 4. Fantaro ny habetsan'ny famandrihana
Rehefa vita ny dingana teo aloha dia afaka manamarina ny habetsaky ny fisoratana anarana izahay arakaraka ny tanjakay ara-bola manokana. Ny fizarana famandrihana dia midika fa te-hisoratra anarana amin'ny fizarana maromaro ianao, ohatrinona ny ampahany. Ity misy ohatra iray amin'ny sarimihetsika malaza "Nezha ". Raha mividy tombony 50 000 RMB eo ho eo ianao, mifototra amin'ny tahan'ny fizarana 3 miliara yuan ankehitriny sy ny vola mitentina 60 tapitrisa RMB, ny anjaran'ny vola miditra amin'ny boaty dia manodidina ny 1 tapitrisa RMB, izay avo 20 heny amin'ny voalohany. Alefaso ny fizarana sarimihetsika, afaka miahiahy momba ny vola miditra amin'ny fampiasam-bolanao mivantana.
Dingana 5. Stsy miraharaha ny fifanarahana
Misy fomba roa hanaovana sonia ny fifanarahana: voalohany, sonia mifanatrika amin'ny orinasa; faharoa, mandoa vola 10% mialoha amin'ny kaontin'ny orinasa, ary halefan'ny orinasa anao ny fifanarahana taratasy amin'ny tombo-kase ofisialy. Rehefa vita ny fandoavana ny fandoavam-bola, halefa any amin'ny orinasa ny fifanarahana ary manan-kery ny fifanarahana.
Aorian'ny famoahana ny sarimihetsika dia miandrasa bonus - ny mpisolovava kaonty dia manisa bonus ary avy eo mandefa vola any amin'ny carte de banky amin'ny fifanarahana navelanao. Aorian'izany, azonao atao ny miandry ny famoahana ilay sarimihetsika ary miandry ny fidiran'ny vola miditra. Mandritra io vanim-potoana io, raha te hikarakara ny zava-misy farany amin'ny sarimihetsika ianao, ary hahafantatra ny fivoaran'ny sary, ny famitana, ny boaty aorinan'ny famoahana sy ny fampahalalana hafa, azonao atao ny mijery azy io amin'ny Internet, na misintona ny fampahalalana momba ny sarimihetsika APP amin'ny manontany.
CONSULTATION MAIMAIMPOANA 400-080-6060
ADDRESS A3010, No.8 Middle Street, Jin jia Village, Bei hua yuan, Gao bei dian Township, Beijing
Mailaka:customer@heart-galaxy.com Skype: customer@heart-galaxy.com Wechat: 13691367185
Voninkazo Mena kely
Andro tsara kokoa